Ciidamada Dowladda soo qabtay laba ka tirsan Argaggixisada Al-shabaab. | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Ciidamada Dowladda soo qabtay laba ka tirsan Argaggixisada Al-shabaab.
Ciidamada Dowladda soo qabtay laba ka tirsan Argaggixisada Al-shabaab.
Muqdisho (SNTV)–Ciidammada amniga ayaa gacanta ku dhigay eedaysane lagu tuhmayo in uu ka tirsan yahay argagixisada Alshabaab oo walxaha qarxa ku xiray gaari uu lahaa qof shacab ah oo yaallay waddada Makka Almukarrama ee magaalada Muqdisho.
Qabashada eedaysanahaasi ayaa ka danbaysay kadib markii ay dad arkayay markuu gaariga ku xirayay waxlxaha qarxa ku wargaliyeen ciidamada amniga ee ka howgala nawaaxigaas, waxaana suuro gashay in la qabto ruuxii gaariga qaraxa ku xiray.
Warka ayaa intaasi ku daraya in gaariga oo yaallay agagaarka shineemo Soomaaliya uu waqti yar qarxay, mana jirin wax khasaare ah oo qaraxaasi ka dhashay.
Dhanka kale Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa Suuqa Bakaaraha ee degmada Howl-Wadaag ee gobolkan Banaadir waxa ay ku toogteen Nin hubeysnaa oo dhaawacay askari ka tirsan Ciidamada Dowladda, Falkan ayaa ka dhacay Isgoyska Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo go’aan ka soo saartay Dhoofinta Dhuxusha
Next articleYaaqshiid oo caawa u soo gudubtay wareegga Labaad ee tartanka